Rezvani Motors နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း..
Rezvani Motors သည် super car များကို customize ပြုလုပ်ပေးနေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် motor corporation ဖြစ်ပါသည်။၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ၌ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Ferris Rezvani မှ California ပြည်နယ်ရှိ Irvine မြို့ လေးတွင် အခြေစိုက်ကာ Rezvani super car များကို ဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
ယခု Rezvani Motors မှ 2017 ခုနှစ် အတွက် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် Rezvani Tank တွင်မူ ရှေးအရင် စစ်ဘက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိထားသည့် Armored Tank Vehicle များထက် သာလွန်ထူးခြားမှုကို သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ Armored Tank များကို Tank ဟု ဆိုရုံဖြင့် စစ်မြေပြင်တွင်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်ထား သည်ဟု ထင်ကောင်း ထင်မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် Rezvani Tank ၏ ထူးခြားချက်တွင်ကား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ခေတ်သစ် စစ်ပွဲများအတွင်းပါ အသုံးပြုမောင်းနှင်နိုင်ရန် မဟာဗျူဟာမြောက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းကြောင့် ခေတ်သစ် ဘက်စုံသုံး SUV ဟု မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံအချို့တွင် အနာဂတ်စစ်ပွဲများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ Armored Tank SUV များကို ထွင်ကျယ်စွာ ထုတ်လုပ် အသုံးပြုလာကြပါသည်။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင်ဖြင့် UN (United Nation) ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများတွင် သုံးစွဲနေပြီဖြစ်သည်။
ယင်း Armored Tank SUV များကို Alpine Armoring Pit Bull VX ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ Armored Tank များနှင့်မတူညီသည့် Resvani Tank များ၏ အားသာချက်တွင်ကား Alpine Armoring Pit Bull VX ကားများထက် ပိုမို အချိုးစားကျကျ ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး MPV ( Multi Purpose Vehicle ) အဖြစ် အနာဂတ် အတွက် အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်ကား အနာဂတ်ခေတ်တွင် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်မထားသည့် Nuclear စစ်ပွဲများ အတွင်း အရပ်ဘက် အသုံးပြုသွားလာမောင်းနှင်ရန် Rezvani Tank ကြီးမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြင်းကောင်ရေ 500 အထိ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် 6.4 လီတာ V6 အင်ဂျင် ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြား ရွေးခြယ်စရာ အဖြစ် 3.6 လီတာ V6 အင်ဂျင် အမျိုးအစားကိုပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်....
နယ်မြေမရွှေး သွားလာလို့လွယ်ကူစေရန် Aluminium နှင့် ပုံစံကျ ဒီဇိုင်းဆွဲအသုံးပြုထားသည့် Off-Road ဘီးဒီဇိုင်း.....
အလိုအလျောက် အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်ပေးမည့် အထူထပ်ဆုံး သံထည်ပါဝင်သည့် တံခါး နှစ်ချက် နှင့် Luxury မြောက် အတွင်းခန်း......
နာရီပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သည့်တိုင် မောင်းနှင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ထိုင်ခုံအနေအထား....သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်မှာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့...
Four-wheel drive စနစ် ပါရှိထားတာကြောင့် တောင်တက်ခရီးတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်... ဒါ့အပြင် Four- wheel drive ကိုလိုအပ်သလို အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထည့်ထားပါသေးတယ်...
Thermal Night Vision (အနီအောက် ရောင်ခြည် ) ခြေရာခံစနစ် တွေပါရှိထားလို့.. အမှောင်ထဲ မီးပိတ်မောင်းနှ်င်နိုင်ပါတယ်..
Head-Up Display — GPS system, ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း တွေအပြင် Fuel Level နဲ့ message ပေးပို့ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ဖော်ပြနိုင်ပေးမည့် Display system...
ဈေးနှုန်းအားဖြင့် USD 178,000 တန်ကြေးရှိသည့် Rezvani Tank ကြီးသည် အနာဂတ် ကမ္ဘာ အတွက် အားကိုးရာ ယာဉ်တစ်စီး ဖြစ်လာမည်လား?.
Photo Credit to http://www.rezvanimotors.com